အာဏာဖီဆန် ဘက်ပြောင်းလာသူ တပ်မတော်သား ၈၀၀ ကျော်ရှိပြီ (ဗိုလ်ကြီးမင်းမောင်မောင်)
Army officers detainaman duringaprotest against the military coup in Yangon, Myanmar, March 2, 2021. Picture taken from behindawindow. REUTERS/Stringer
စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက် အာဏာဖီဆန်တဲ့အနေနဲ့ တပ်ကနေ ထွက်ပြေးလာသူ ၈၀၀ ကျော်ရှိတယ်လို့ ဇွန်လကထွက်ပြေးလာသူ ဗိုလ်ကြီးမင်းမောင်မောင်က ပြောပါတယ်။ သူကတော့ ရန်ကုန်တိုင်း တိုက်ကြီးမြို့နယ်မှာ အခြေစိုက်တဲ့ အမှတ် ၁၄ စစ်မြေပြင်ဆေးတပ်ရင်းက ခွဲစိတ်ပါရဂူဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ကောင်စီကို ဆန့်ကျင်နေသူတွေဘက် ပြောင်းလာသူတွေထဲက အမြင့်ဆုံးရာထူးနဲ့ ဘယ်တပ်တွေကလဲဆိုတာ မစုမြတ်မွန်က ဗိုလ်ကြီးမင်းမောင်မောင်ကို ဆက်သွယ်မေးထားပါတယ်။
မစုမြတ်မွန် ။. ။ အခုစစ်တပ်က အာဏာသ်ိမ်းပြီးနောက် ဗိုလ်ကြီးတို့လို တပ်ကထွက်လာသူ တပ်မတော်က ထွက်လာသူ ဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ရှိလဲရှင့်။
ဗိုလ်ကြီးမင်းမောင်မောင်. ။. ။ ထွက်လာတဲ့သူတွေကတော့ အများကြီးပဲပေါ့။ သူတို့တွေကတော့ ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ပေါ့။ တချို့တွေကတော့ လွတ်မြောက်နယ်မြေမှာရှိကြတယ် ။ တချို့ကတော့ပြည်သူလူထု့ထဲမှာ ရှိကြတယ်။ သို့သော်လည်းပဲ ရှိတဲ့ Data စာရင်းဇယားအရ အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် ၈၀၀ နဲ့ တထောင်ကြားမှာရှိကြပါတယ်။ ကျနော်တို့ ၈၈ အရေးအခင်းတုံးက ပြည်သူလူထု့နဲ့ ပူးပေါင်းတဲ့ တပ်မတော်သား အင်အားဆိုတာ အင်မတန်နည်းပါတယ်။ အခု ပြည်သူလူထု့နဲ့ ပူးပေါင်းတဲ့ တပ်မတော်သားအင်အားဆိုတာ ထောင်ဂဏန်းနီးပါးပေါ့။ နောက်ပိုင်းလည်း ဒီထက်များလာမယ်လို့ ကျနော်အနေနဲ့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒါအင်မတန်များတဲ့ ပမာဏပါ။
မစုမြတ်မွန် ။. ။ စောစောက ပြောတော့ ၈၀၀ ဝန်ကျင်လောက်လို့ပြောတော့ ဘယ်တပ်တွေကထွက်လာလဲလို့ အများဆုံးလို့သိရပါတယ်။ ရာထူးအမြင့်ဆုံးက ဘယ်အဆင့်ရှိလဲရှင့် ။
ဗိုလ်ကြီးမင်းမောင်မောင် ။. ။ အများဆုံးဆိုတာထက်တော့ လျှပ်တပြက်တွေရတဲ့ အနေအထားတော့မဟုတ်ဘူး။ ဘက်ပေါင်းစုံက ထွက်လာကြတာပေါ့ ။ အဲတော့ အခုအချိန်အထိတော့ ဗိုလ်မှူးအဆင့်က အမြင့်ဆုံးရာထူးထွက်လာကြတာပေါ့.။ နောက်ပိုင်း ပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှုတွေ အားကောင်းလာမယ်။ သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း တချို့နေရာမှာ ပြည်သူနဲ့ ပူးပေါင်းချင်တဲ့ အနေအထားတွေရှိလာမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီထက်ရာထူးကြီးမားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်း ပြည်သူနဲ့ ပူးပေါင်းလာလိမ့်မယ်လို့ ကျနော်အနေနဲ့ မျှော်လင့်နေတယ် မျှော်လင့်နေစဲပေါ့။
မစုမြတ်မွန်။. ။ စောစောက မေးတဲ့ မေးခွန်းပြန်မေးရမယ်ဆိုရင် ကြည်း၊ ရေ၊ လေ ဘယ်တပ်တွေက ထွက်လာတဲ့သူများတယ်လို့ ပြောရမလဲရှင့် ။
ဗိုလ်ကြီး မင်းမောင်မောင် ။. ။ အဲဒါတော့ ကျနော်မှာ Data အတိအကျမသိတဲ့အတွက်ကြောင့် ပြောလို့တော့မရဘူးဗျ။ အခုနပြောသလို နေရာစုံကထွက်လာတော့ ကျနော်အနေနဲ့ ပြောလို့တော့မရဘူး။
မစုမြတ်မွန်။. ။ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတာက ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်ကမှသိမ်းတယ်။ ဗိုလ်ကြီးက ဇွန်လ ကမှ ထွက်လာတယ်ပေါ့။ လေးလအကြာမှထွက်လာတယ်။ ဒီကြားထဲမှာ အခက်ခဲရှိလို့လား ။ ဘာကြောင့် လေးလလောက်အကြာမှထွက်လာတယ်လို့ပြောလို့ရလားရှင့်။
ဗိုလ်ကြီးမင်းမောင်မောင် ။. ။ အဲဒါကတော့ ကျနော် လျှို့ဝှက်ချက်ကို ပြောပြရမှာပေါ့နော်။ ကျနော်ဟာ အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ ဒါအခုနကပြောသလိုပေါ့။ ကျနော့်ရဲ လူမှုကွန်ရက် အကောင့်ဟာ (. ) ဖြစ်သွားတယ်။ သို့သော် နောက်တဖက် လူမှုကွန်ရက် အကောင့်ကနေ Motivation စာတွေရေးနေခဲ့တယ်။ တဖက်မှာလည်း ပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းဖို့ အခွင့်အလန်းရှာနေတယ်။ သို့သော်လည်း ဘယ်လိုပူးပေါင်းရမလဲဆိုတာကို မသိဘူးပေါ့နော်။ ဘယ်သူနဲ့ ဆက်သွယ်ရမလဲ ။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကို နည်းလမ်းတွေရှာနေတာပေါ့နော်။ တလက်စတည်း ဆက်သွယ်လို့ရတဲ့ သူတွေနဲ့ဆက်သွယ်ထားတယ်။ သို့သော်လည်းပဲ အကြောင်းပြန်ကြားမှုတော့မရှိခဲ့ဘူး။ ဒါပေမယ့် ကြာလေကြာလေ ကျနော်အနေနဲ့ အထဲမှာနေရတဲ့ အရာတခုက စိတ်ဖိစီးမှုကို ခံစားလာရတယ်။ အဲဒီတော့ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ် ကျနော်အနေနဲ့ ရအောင်ထွက်မယ်ကွာဆိုပြီးတော့ ကျနော်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ ထွက်လာတာပါ။ ကြားထဲမှာတော့ အာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်ကစပြီး တောက်လျှောက် ကြိုးစားနေခဲ့တာပဲ။
မစုမြတ်မွန်။.။ ဗိုလ်ကြီးက CDM လုပ်ပြီးတပ်ကနေ ထွက်ပြေးလာခဲ့တာပေါ့။ အဲဒီနောက်မှာကော နောက်ဆုံးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ ဆေးတပ်ရင်းမှာ ဘယ်လိုဂယက်တွေရိုက်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့လဲရှင့်။
ဗိုလ်ကြီးမင်းမောင်မောင် ။. ။ ကျနော်လိုက်ပြီးတော့ မစုံစမ်းတော့ဘူးဗျ ။ ထားခဲ့တဲ့အခြားတဖက်မှာ ဒီအတိုင်းရှိပါစေလို့ပဲ ထားခဲ့တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျနော်ဟာ ပြည်သူဖက်တော်သားဖြစ်သွားပြီး။ ကျနော်စိတ်ဝင်စားတာက ပြည်သူအရေးပဲ စိတ်ဝင်စားတယ်။ ဒီနွေဦးတော်လှန်ရေးအောင်မြင်ဖို့အတွက် ကျနော်တို့အနေနဲ့ ဘယ်လိုရှုထောင့်ကနေ ပါဝင်ပေးလို့ရမလဲလို့ပဲ ကျနော်စိတ်ဝင်စားတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့အရာတွေကို ကျနော်မေ့လိုက်ပါပြီ။
မစုမြတ်မွန်။.။ အခုတပ်ကနေထွက်လာပြီး ပြည်သူအများဆန္ဒပြသူတွေနဲ့ စစ်ကောင်စီကို ဆန့်ကျင်သူတွေနဲ့ရပ်တည်နေပြီဆိုတော့ ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ ဗိုလ်ကြီးဘာတွေလုပ်မယ်အစီစဉ်ရှိလဲရှင့် ။
ဗိုလ်ကြီး မင်းမောင်မောင် ။.။ ကျနော်ဟာ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တယောက်ပါ။ ကျနော်ရဲ့ ပရောဖက်ရှင်ကတော့ ဆေးကု့သခွဲစိတ်ခြင်းပေါ့ဗျာ။ သို့သော်လည်းပဲ နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာတော့ ကျနော်နိုင်တဲ့ဝန်ထမ်းမှာပဲ။ ကျနော်ဘာတွေလုပ်နေသလဲဆိုတာကတော့ ကျနော်လုံခြုံရေးအခြေအနေအရ တချို့အရာတွေကိုတော့ ကျနော်မပြောပရစေနဲ့။
မစုမြတ်မွန် ။.။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဗိုလ်ကြီးမင်းမောင်မောင် ရှင့်။
ဗိုလ်ကြီးမင်းမောင်မောင် ။။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မစုမြတ်မွန် ရေ။
စဈတပျအာဏာသိမျးပွီးတဲ့နောကျ အာဏာဖီဆနျတဲ့အနနေဲ့ တပျကနေ ထှကျပွေးလာသူ ၈၀၀ ကြျောရှိတယျလို့ ဇှနျလကထှကျပွေးလာသူ ဗိုလျကွီးမငျးမောငျမောငျက ပွောပါတယျ။ သူကတော့ ရနျကုနျတိုငျး တိုကျကွီးမွို့နယျမှာ အခွစေိုကျတဲ့ အမှတျ ၁၄ စဈမွပွေငျဆေးတပျရငျးက ခှဲစိတျပါရဂူဖွဈပါတယျ။ စဈကောငျစီကို ဆနျ့ကငျြနသေူတှဘေကျ ပွောငျးလာသူတှထေဲက အမွငျ့ဆုံးရာထူးနဲ့ ဘယျတပျတှကေလဲဆိုတာ မစုမွတျမှနျက ဗိုလျကွီးမငျးမောငျမောငျကို ဆကျသှယျမေးထားပါတယျ။
မစုမွတျမှနျ ။. ။ အခုစဈတပျက အာဏာသိမျးပွီးနောကျ ဗိုလျကွီးတို့လို တပျကထှကျလာသူ တပျမတျောက ထှကျလာသူ ဘယျနှဈယောကျလောကျရှိလဲရှငျ့။
ဗိုလျကွီးမငျးမောငျမောငျ. ။. ။ ထှကျလာတဲ့သူတှကေတော့ အမြားကွီးပဲပေါ့။ သူတို့တှကေတော့ ပုံစံမြိုးစုံနဲ့ပေါ့။ တခြို့တှကေတော့ လှတျမွောကျနယျမွမှောရှိကွတယျ ။ တခြို့ကတော့ပွညျသူလူထု့ထဲမှာ ရှိကွတယျ။ သို့သျောလညျးပဲ ရှိတဲ့ Data စာရငျးဇယားအရ အကွမျးဖငျြးအားဖွငျ့ ၈၀၀ နဲ့ တထောငျကွားမှာရှိကွပါတယျ။ ကနြျောတို့ ၈၈ အရေးအခငျးတုံးက ပွညျသူလူထု့နဲ့ ပူးပေါငျးတဲ့ တပျမတျောသား အငျအားဆိုတာ အငျမတနျနညျးပါတယျ။ အခု ပွညျသူလူထု့နဲ့ ပူးပေါငျးတဲ့ တပျမတျောသားအငျအားဆိုတာ ထောငျဂဏနျးနီးပါးပေါ့။ နောကျပိုငျးလညျး ဒီထကျမြားလာမယျလို့ ကနြျောအနနေဲ့ မြှျောလငျ့ပါတယျ။ ဒါအငျမတနျမြားတဲ့ ပမာဏပါ။
မစုမွတျမှနျ ။. ။ စောစောက ပွောတော့ ၈၀၀ ဝနျကငျြလောကျလို့ပွောတော့ ဘယျတပျတှကေထှကျလာလဲလို့ အမြားဆုံးလို့သိရပါတယျ။ ရာထူးအမွငျ့ဆုံးက ဘယျအဆငျ့ရှိလဲရှငျ့ ။
ဗိုလျကွီးမငျးမောငျမောငျ ။. ။ အမြားဆုံးဆိုတာထကျတော့ လြှပျတပွကျတှရေတဲ့ အနအေထားတော့မဟုတျဘူး။ ဘကျပေါငျးစုံက ထှကျလာကွတာပေါ့ ။ အဲတော့ အခုအခြိနျအထိတော့ ဗိုလျမှူးအဆငျ့က အမွငျ့ဆုံးရာထူးထှကျလာကွတာပေါ့.။ နောကျပိုငျး ပွညျသူ့လှုပျရှားမှုတှေ အားကောငျးလာမယျ။ သူတို့ကိုယျတိုငျလညျး တခြို့နရောမှာ ပွညျသူနဲ့ ပူးပေါငျးခငျြတဲ့ အနအေထားတှရှေိလာမယျဆိုရငျတော့ ဒီထကျရာထူးကွီးမားတဲ့ ပုဂ်ဂိုလျတှလေညျး ပွညျသူနဲ့ ပူးပေါငျးလာလိမျ့မယျလို့ ကနြျောအနနေဲ့ မြှျောလငျ့နတေယျ မြှျောလငျ့နစေဲပေါ့။
မစုမွတျမှနျ။. ။ စောစောက မေးတဲ့ မေးခှနျးပွနျမေးရမယျဆိုရငျ ကွညျး၊ ရေ၊ လေ ဘယျတပျတှကေ ထှကျလာတဲ့သူမြားတယျလို့ ပွောရမလဲရှငျ့ ။
ဗိုလျကွီး မငျးမောငျမောငျ ။. ။ အဲဒါတော့ ကနြျောမှာ Data အတိအကမြသိတဲ့အတှကျကွောငျ့ ပွောလို့တော့မရဘူးဗြ။ အခုနပွောသလို နရောစုံကထှကျလာတော့ ကနြျောအနနေဲ့ ပွောလို့တော့မရဘူး။
မစုမွတျမှနျ။. ။ စဈတပျအာဏာသိမျးတာက ဖဖေျောဝါရီလ ၁ ရကျကမှသိမျးတယျ။ ဗိုလျကွီးက ဇှနျလ ကမှ ထှကျလာတယျပေါ့။ လေးလအကွာမှထှကျလာတယျ။ ဒီကွားထဲမှာ အခကျခဲရှိလို့လား ။ ဘာကွောငျ့ လေးလလောကျအကွာမှထှကျလာတယျလို့ပွောလို့ရလားရှငျ့။
ဗိုလျကွီးမငျးမောငျမောငျ ။. ။ အဲဒါကတော့ ကနြျော လြှို့ဝှကျခကျြကို ပွောပွရမှာပေါ့နျော။ ကနြျောဟာ အာဏာသိမျးပွီးတဲ့အခြိနျကစပွီးတော့ ဒါအခုနကပွောသလိုပေါ့။ ကနြေျာ့ရဲ လူမှုကှနျရကျ အကောငျ့ဟာ (. ) ဖွဈသှားတယျ။ သို့သျော နောကျတဖကျ လူမှုကှနျရကျ အကောငျ့ကနေ Motivation စာတှရေေးနခေဲ့တယျ။ တဖကျမှာလညျး ပွညျသူနဲ့ပူးပေါငျးဖို့ အခှငျ့အလနျးရှာနတေယျ။ သို့သျောလညျး ဘယျလိုပူးပေါငျးရမလဲဆိုတာကို မသိဘူးပေါ့နျော။ ဘယျသူနဲ့ ဆကျသှယျရမလဲ ။ ဘယျလိုလုပျရမလဲဆိုတာကို နညျးလမျးတှရှောနတောပေါ့နျော။ တလကျစတညျး ဆကျသှယျလို့ရတဲ့ သူတှနေဲ့ဆကျသှယျထားတယျ။ သို့သျောလညျးပဲ အကွောငျးပွနျကွားမှုတော့မရှိခဲ့ဘူး။ ဒါပမေယျ့ ကွာလကွောလေ ကနြျောအနနေဲ့ အထဲမှာနရေတဲ့ အရာတခုက စိတျဖိစီးမှုကို ခံစားလာရတယျ။ အဲဒီတော့ ဘယျလိုနညျးနဲ့ဖွဈဖွဈ ကနြျောအနနေဲ့ ရအောငျထှကျမယျကှာဆိုပွီးတော့ ကနြျောဆုံးဖွတျပွီးတော့ ထှကျလာတာပါ။ ကွားထဲမှာတော့ အာဏာသိမျးတဲ့အခြိနျကစပွီး တောကျလြှောကျ ကွိုးစားနခေဲ့တာပဲ။
မစုမွတျမှနျ။. ။ ဗိုလျကွီးက CDM လုပျပွီးတပျကနေ ထှကျပွေးလာခဲ့တာပေါ့။ အဲဒီနောကျမှာကော နောကျဆုံးတာဝနျထမျးဆောငျခဲ့တဲ့ ဆေးတပျရငျးမှာ ဘယျလိုဂယကျတှရေိုကျခတျမှုတှရှေိခဲ့လဲရှငျ့။
ဗိုလျကွီးမငျးမောငျမောငျ ။. ။ ကနြျောလိုကျပွီးတော့ မစုံစမျးတော့ဘူးဗြ ။ ထားခဲ့တဲ့အခွားတဖကျမှာ ဒီအတိုငျးရှိပါစလေို့ပဲ ထားခဲ့တယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ ကနြျောဟာ ပွညျသူဖကျတျောသားဖွဈသှားပွီး။ ကနြျောစိတျဝငျစားတာက ပွညျသူအရေးပဲ စိတျဝငျစားတယျ။ ဒီနှဦေးတျောလှနျရေးအောငျမွငျဖို့အတှကျ ကနြျောတို့အနနေဲ့ ဘယျလိုရှုထောငျ့ကနေ ပါဝငျပေးလို့ရမလဲလို့ပဲ ကနြျောစိတျဝငျစားတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့အရာတှကေို ကနြျောမလေို့ကျပါပွီ။
မစုမွတျမှနျ။. ။ အခုတပျကနထှေကျလာပွီး ပွညျသူအမြားဆန်ဒပွသူတှနေဲ့ စဈကောငျစီကို ဆနျ့ကငျြသူတှနေဲ့ရပျတညျနပွေီဆိုတော့ ရှဆေ့ကျပွီးတော့ ဗိုလျကွီးဘာတှလေုပျမယျအစီစဉျရှိလဲရှငျ့ ။
ဗိုလျကွီး မငျးမောငျမောငျ ။. ။ ကနြျောဟာ ခှဲစိတျဆရာဝနျတယောကျပါ။ ကနြျောရဲ့ ပရောဖကျရှငျကတော့ ဆေးကု့သခှဲစိတျခွငျးပေါ့ဗြာ။ သို့သျောလညျးပဲ နှဦေးတျောလှနျရေးမှာတော့ ကနြျောနိုငျတဲ့ဝနျထမျးမှာပဲ။ ကနြျောဘာတှလေုပျနသေလဲဆိုတာကတော့ ကနြျောလုံခွုံရေးအခွအေနအေရ တခြို့အရာတှကေိုတော့ ကနြျောမပွောပရစနေဲ့။
မစုမွတျမှနျ ။. ။ ကြေးဇူးတငျပါတယျ ဗိုလျကွီးမငျးမောငျမောငျ ရှငျ့။
ဗိုလျကွီးမငျးမောငျမောငျ ။ ။ ကြေးဇူးတငျပါတယျ မစုမွတျမှနျ ရေ။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် အာဏာရှင် ဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှုကို နှိမ်နင်းနိုင်မလား
အာဏာသိမ်း (၅)လပြည့် ရန်ကုန်နဲ့ ကသာမြို့တို့မှာ ပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်